Nhau - Ndeapi maitiro e polyester taffeta machira
Taffeta inonzi zvakare polyester taffeta, jira rakajairika muhupenyu, asi kuwedzera kune vanhu vane hunyanzvi, vanhuwo zvavo pakunzwisisa kwake hakuna kujeka, saka tinosvika pakunzwisisa hunhu hwepolyester taffeta.
Polyester taffeta machira maitiro: Polyester taffeta itsika yemakemikari fiber jira, ine mhando yakanaka, yakasimba uye inopfeka isingagadzirike, yakachipa, iri nyore kutarisira uye zvimwe zvakanaka, vanhu vanoda. Kunyanya mushure mekudzika kwekugadziriswa uye kushandiswa kwekumhanyisa maitiro, kuoneka kwemachira pamusoro kunovandudzwa zvakanyanya. Kunyanya, iyo matte polyester sirika inogamuchirwa. Mucheka wakagadzirwa nemucheka uyu une vara rakapfava uye rinotaridzika, izvo zvinokodzera kugadzira zvipfeko zvisina kujairika, mbatya dzemitambo uye kupfeka kwevana. Mavara akasiyana siyana anowedzera kune runako runokwezva. Matte polyester taffeta inogamuchirwa nekuda kwechitarisiko chayo chakajeka uye mutengo wakaderera, polyester taffeta inogona kugadzirwa kuita majaketi, amburera, mota, mbatya dzemitambo, mabhegi, mubhedha wemikwende, mabhegi ekurara, matende, machira ekugezera, machira etafura zvichingodaro. Poly Taffeta imhando yechinyakare chemakemikari fiber jira. Izvo zvave zvichizivikanwa kwenguva yakati, asi kutengesa kwaramba nekuwedzerwa kwechirimwa chitsva chemachira ekugadzira. Mumakore achangopfuura, polyester taffeta machira ane matte sirika, uye ane mavara mavara mavara mumusika. Ivo vanoshandisa matte polyester tambo, idzo dzakapfava uye dzinoyevedza. Izvo zvakakodzera kugadzira zvipfeko zvisina kujairika zvipfeko zvemitambo zvevana. Kune akati wandei emavara, iyo yepamusoro muviri ine fashoni, yakawedzerwa kune inonyengedza runako. Matte polyester taffeta iri nyore kugashira nekuda kwechitarisiko chayo chakajeka uye mutengo wakaderera. *** padyo, yakakwira density anti feather taffeta ine yakasarudzika runako. Yakazara nesimba. Yakave zvakare yakaonda mucheka-wekupfeka jira iro vanhu vanotsvaga kubva kune yekutanga bani folda. Yayo "290T kana yakawanda polyester taffeta" yakagamuchirwa nevakawanda vanogadzira zvipfeko. Iwo maratidziro ezvigadzirwa ari 290T 300T 320T, nezvimwe. Iyo polyester firita zvigadzirwa zvinobatanidzwa zvese semi-gloss FDY48D / 48F 50D / 48F, nezvimwewo, zviri pachena zviri nani kupfuura pakutanga mumusika.
Nekuda kwekutengeswa kwemajaketi epasi, iyo yekumvura zasi jeti yakarukwa "290T + tembiricha yakakosha *** dhiragoni" inoshandiswa kumafuta uye magirazi kuseri kwejasi rejasi repasi, pamwe nekumonerwa kwejasi repasi rine anti-feather kupfeka. Iyo yakarukwa uye weft inogadzirwa ne polyester semi-blunt FDY50D / 48F uye bani rakarukwa pamvura jeti pachirukiso. Iyo inopindirana maererano ne (290T kana pamusoro) magadzirirwo. Mucheka wacho unotenderera. Alkali rutapudzo rwekudhaya mapurasitiki akapfava uye mamwe maitiro, zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, kudzvanya uye kudirana uye kumwe kunokosha kupedzisa maitiro, chigadzirwa chine yunifomu yekuumbwa, yakatetepa uye yakapfava, inotsvedzerera uye isina kusimba pamusoro, isinga crunching uye isingasvibise hunhu, haigone chete machira evarume nevakadzi emitambo yekuzorora ndiyo yakanakisa lining yechando pasi bhachi. Ivo vakanaka uye vakapfava, vane echinyakare maitiro. Hupamhi hwejira ndeye 160 cm. Nekuda kwehukuru hwehuwandu hweF, iyo polyester taffeta maitiro yakasununguka kwazvo kupfeka, saka inozivikanwa kwazvo. Naizvozvo, iyo semi-kutsakatika 48D / 48F 50D / 48F 68D / 48F pamusika we polyester yarn inozivikanwa kwazvo, uye mutengo wepolesterita wakakwira zvine mwero.